HomeAfaan OromooUummata mesha maleeyyii maanguddoota dabalatee ajjeesuuf hidhuun, dararaa irratti raawwachaa afaaniin bilisummaa labsuun gaafatama seeraaf seenaa jalaa nama hinbaasu!
Qalbeessaa Dhangi’aatiin, Amajjii 17, 2019
Garbummaan biyya tokko irratti gaafa fe’amu qabsoon uummatni taasisu qabsoo Bilisummaati. Qabsoon Bilisummaa gaaffii abbaa biyyummaa dabalatee gaaffilee jajjabduudhaan eegalee finiina. Qabsoon finiines roga aanjaa’aa qabataa adeemuun cichoomaan uummaticha gara bilisummaatti ceesisa. Uummatni Oromoos gaaffii abbaa biyyummaa barootaaf gaafataa ture gaafataa jira. Gaaffiiwwan Oromoo ijoon gaafatamanii waan gaafateef qofa Oromoon ajjeefamaa tureef tuullaa gaaffii ta’ee kan jiru malee guyyaa tokkoof deebi’aniiru jechuu hindandeenyu. Keessattuu gaaffiin Oromoo gaaffii magaalaa Finfinnee hiika dhabee, deebii maseenee hanga ammaa akka jiru namuu nii beeka. Dabalataan gaaffiin Oromoon afaan Oromoof qabu hiika dhabee jira. Murni OPDO gaafa uummata Oromoo garaa moogeessuu barbaadu Oromoodhaan ibsa “gaaffii magaalaa Finfinnee irraa qabdan nii deebifna, afaan Oromoo afaan fedaraalaa goona!” Jechuun waadaa qilleensaarraan uummata gowwomsaa jira. Gaaffiilee lamaan dhimma magaalaa Finfinnee fi afaan Oromoo afaan hojii biyyattii taasisuu utuu hindeebisin Oromoodhaan Bilisummaa qabda jechuun yakka.
Murni gaaffii Oromoo deebisuu hindandeenye utuu Oromoo kumootaan ajjeesaa, kumootaan hidhaa miliyoonaan lafarraa buqqaasaa jiruu Bilisummaa qabda jechuun uummata burjaajessuun yakka qofaas miti siyyaasa kufaa hordofuurraa madda. Siyyaasa bosose hordofanii, uummata kana gara fedhii isaatti ceesifna jechuunis hindandaa’amu. Oromoo gowwomsaa Oromoo bulchuunis matumaa hindandaa’amu. Haqaan deemutu barbaachisa, Oromoonis dhugaa jaallata. Dhugaan ilmoo waaqillee.
Bilisummaan Oromoo gaafa ajjeechaan irraa dhaabbate, gaafa bilisaan hireesaa murteeffate, gaafa bilisaan paartii barbaade deggaree, kan barbaade mormuu danda’u mirkanaa’a. Har’a garuu OPDO ta’uu baannan nii adamfamta, nii hidhamta. Akkasuma ajjeechaaf godaansi irraa dhaabbatee, qe’eesaatti nagaan bahee nagaan galuu, daangaasaa sararatee eeggachuu gaafa danda’e Oromoon bilisoomeera. Har’a utuu daangaa Oromiyaa irraan ajjeefamnuu, utuu ABO deggarta jechuun adamsamee hidhamuu Oromoodhaan Bilisummaa qabda jechuun gowwomsaa siyyaasaa fakkaatus ajandaa kufaadhaan uummata gowwomsuuf yaaluu akka ta’eettin hubadha akkasidhas.
Waan ta’eef uummata meesha maleeyyii maan-guddoota dabalatee ajjeesuuf hidhuun wayiita lafa qabatee jiru kanatti afaaniin Bilisummaa sobaa labsuun gaafatama jalaa nama hinbaasu. Nuti kan jenne deemsi Oromoo ammayyuu sichi, wal qabannee gara bilisummaatti ceesifna, gaaffii uummataa wal deggarree deebisna jechaa jirra malee gaaffii uummataa marmarree Saanduqa shiraa keessatti ukkaamsina jennee qabsoon gochaa jirru hinjiru. Gaaffii uummataa deebistanii gaafa lafa akeeka uummataa sana geessan bilisummaa nuu labsuu dandeettu. Kanaan alatti murni kamuu amma akka waan Oromoon Bilisoomeetti dubbachuun sobduu isa taasisaan ala qabsoo uummataa sherfee tokko haanxessee waan miidhu hinqabu. Uummata daangaarraa miliyoonaan buqqaa’ee araddaa dhabee jiru bakkeetti ilaalaa, araddaan Oromoo midhaan dabalatee halagaadhaan barbadaa’aa utuu jiruu uummata sobuu yoo ta’een ala bilisummaan argame hinjiru. Haa ta’uutii murni tokkoof, namni dhuunfaa tokko bilisummaa argateera ta’a. Akkamiitti? kan jedhuuf bilisummaan Oromoo ajjeesisanii aangoo qabachuuf akkasuma Oromoo ajjeesaa, hidhaa bulchuu yoo taate inni akkas godhu bilisoomeera. Qaamotni namqeenxee jaarmiyaas dhaabas hinqabne kanneen xawalwaallee takka uummataaf wabii ta’aa takkammoo mootummaa ajjeesaaf wabii ta’aa waliin dhahanii jiraatan ammoo Bilisummaa dinagdee maddisiifachuu waan ta’eef dinagdee dhuunfaa waan horataniif Bilisoomuu danda’u. Akka sabaatti Oromoon rorroo hamtuu, Elekoopteeraan haleelamuu irra gahee jira. Kun garbummaa keessaayyuu ishee fikkuu, roorroo jibbisiiftuudha. Akkasuma Oromoon garbummaa Bilisummaa fakkaatu keessattis kufee jira.